KENKAN WƆ Abbey Afrikaans Ahanta Aja Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Morocco) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Dairi) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Bulgarian Sign Language Bété Cambodian Carib Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fang Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Ghomálá’ Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Guéré Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Huave Huichol Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itawit Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lambya Laotian Lari Latgalian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Maninkakan (Eastern) Mano Manyawa Mapudungun Marathi Mari Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mbunda Medumba Mende Meru Mingrelian Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nahuatl (Veracruz) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Sign Language New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Ngiemboon Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Phimbi Pidgin (Cameroon) Pilagá Polish Pomeranian Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Russian Russian Sign Language Rutoro Rwandan Sign Language Réunion Creole Saint Lucian Creole Salvadoran Sign Language Samoan Sango Saramaccan Sarnami Sena Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Susu Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Taabwa Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai (Northeastern) Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toabaite Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tyrewuju Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Yacouba Yapese Yemba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Abraham ne Sara
Nnipa pii susuw sɛ, Yehowa Adansefo yɛ ɔsom foforo bi a aba din. Nanso, bɛboro mfe 2,700 a atwam ni na wɔfrɛɛ nokware Nyankopɔn koro no asomfo sɛ ‘n’adansefo.’ (Yesaia 43:10-12) Ansa na afe 1931 reba no, na wɔfrɛ yɛn Bible Asuafo. Dɛn nti na yɛfaa edin Yehowa Adansefo?
Edin no ma wohu yɛn Nyankopɔn. Sɛnea tete nsaano nkyerɛwee ahorow kyerɛ no, Onyankopɔn din Yehowa no pue mpɛn mpempem pii wɔ Bible mu. Wɔ nkyerɛase ahorow pii mu no, wɔde abodin ahorow te sɛ Awurade anaa Onyankopɔn na asi saa din no ananmu. Nanso, na nokware Nyankopɔn no ada ne ho adi akyerɛ Mose sɛ ne din ne Yehowa. Ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Eyi ne me din de kosi daa.” (Exodus 3:15) Ɔnam saa a ɔyɛe no so daa no adi sɛ ɔyɛ soronko wɔ atoro anyame nyinaa ho. Ɛyɛ yɛn anigye paa sɛ Onyankopɔn din kronkron no da yɛn so.
Ɛma wohu adwuma a yɛyɛ. Nnipa a wɔtenaa ase tete no mu pii, a ɔtreneeni Habel na odi kan no, dii Yehowa mu gyidi a na wɔwɔ no ho adanse. Mfehaha pii a atwam no, Noa, Abraham, Sara, Mose, Dawid, ne afoforo bɛkaa “adansefo mununkum kɛse” yi ho. (Hebrifo 11:4–12:1) Sɛnea obi tumi kɔ asɛnnibea kodi adanse ma obi a ɔnyɛɛ bɔne biara no, yɛn nso yɛasi yɛn bo sɛ yɛbɛma nkurɔfo ahu yɛn Nyankopɔn no ho nokwasɛm.
Yɛresuasua Yesu. Bible frɛ Yesu sɛ “ɔdansefo nokwafo.” (Adiyisɛm 3:14) Yesu ankasa kae sɛ ‘wama wɔahu Onyankopɔn din,’ na wakɔ so adi Onyankopɔn ho ‘nokware no ho adanse.’ (Yohane 17:26; 18:37) Enti, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔyɛ Kristo akyidifo ankasa no di Yehowa din ho adanse na wɔma nkurɔfo hu edin no. Eyi na Yehowa Adansefo rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛyɛ.
Dɛn nti na Bible Asuafo no faa edin Yehowa Adansefo?
Efi bere bɛn na Yehowa nyaa adansefo wɔ asase so?
Hena ne Yehowa Dansefo a ɔsen biara?
Sɛ wuhyia asafo a ɛwɔ wo mpɔtam hɔ mufo a, bɔ mmɔden sɛ wubehu wɔn yiye. Bisa wɔn mu bi sɛ: “Dɛn nti na wobɛyɛɛ Yehowa Dansefo?”